Ukuqwalasela Impilo yee Hagu
Undoqo ke ekulawuleni impilo yee hagu kuku chonga iingxaki ne zifo phambi kokuba zinga lawuleki. Ukwenza njalo, amafama kufuneka ohlule phakathi kwesimilo esiqhelekileyo nesinga qhelekanga neempawu zempilo. Nazi iimpawu ekufanele zijongwe:
Izidalwa Ezithanda Ukuba Phandle
Iihagu zizilwanyana ezihlaka niphileyo. Phantsi kwee meko eziqhelekileyo, ziyathanda ukudladla, zithande ukuqonda, kwaye ziziphathe njenge ngxenye yeqela. Zibonakalisa umdla xa ubani engena apho zihlala khona, kwaye ziyayiva ingxolo, uyakuzibona ngokujonga kwelocala isuka ngakulo ingxolo. Xa zigula, ziye zirhoxe kwi qela, zityhafe ziqhwalele. Zingabekelwa bucala zezinye iihagu, oku futhi kungona iindlela ezilala ngayo.
Ukuhamba - Hamba
Iihagu kufuneka zihamba-hambe ngoku khululekileyo, lula. Iihagu ezizi khethayo kwezinye, ezinge namdla, ubunzima bokuhamba, ubunzima ukuphakama, okanye iihagu zihlale zilele phantsi, zimpawu zokuba ukhona undonakele.
Amehlo, Iindlebe kunye ne Mpumlo
Ubuso kufuneka bucoceke amehlo angazichizi. Amehlo angacacanga, iindlebe ezingacacanga okanye indlebe ezijonge phantsi zingachaza okokuba ihagu ayiziva kakuhle. Imikhwinya kufuneka ibe bukukhanya, ungaxinani, kodwa ungabaleki okanye ubene gazi.
Ufele kufuneka lukhazimle, lukhangeleke lusempilweni. Iihagu ezinyama nemibala-bala zivame ukuba nenwele ezininzi, logama ezesimanjemanje iintlobo ezimhlophe zine nwele ezincinci eziplati. Inwele ezithe dzu, eziphashileyo, nezidibeneo, zonke zichaza okokuba ukhona undonakele.
isikhumba kufuneka sicoceke ngaphandle kwamanxeba, izigxala, amabala ajike umbala, izilonda okanye ukuqina. Ngokwe miqolo ebhalwe kwi Pig site ethi Recognising disease on the farm, ukujika umbala ubeluhlaza indawo ezithile kungadityaniswa nosuleleko, ne ‘acute bacterial septicaemia’ ubumdaka, (acute mastitis, metritis, acute pneumonia ) kunye nezinye izifo. Kwihagu ezimibala bala emhlophe, ubu bomvu besikhumba kungachaza isifo okanye usuleleko.
Izinga loku Phefumla
Ihagu esempilweni iphefumla lula, kwaye ngendlela. Indlela eqhelekileyo yokuphefumla kwehagu ixhomekeka kwiminyaka yayo: ihagu esandula kuzalwa esempilweni iphefumla amashumi amahlanu ukuya kumashumi amathandathu ngomzuzu, ekukhuleni phakathi kwamashumi amabini anesihlanu ukuya kumashumi amane ngomzuzu, ze ihagu ezindala ziphefumle ishumi elinesithathu ukuyokuma kwishumi elinesibhozo ngomzuzu.
Ukubetha kwentliziyo okuqhelekileyo kwihagu esele indala ngamashumi amathandathu anesihlanu ukuya kumashumi asibhozo ngomzuzu, kodwa ngaphantsi kwe khulu elinamashumi asibhozo (180) ngomzuzu kwezi sandula kuzalwa.
Ubushushu bomzimba obuqhelekileyo behagu buphakathi ko 38,5 no 39 degrees celcius. Ihagu enobushushu obungapha ko 41 degrees celcius okanye ngaphantsi ko 37 igula kakhulu. Kwaye qaphela okokuba ikhona ingxaki xa ihagu ingcangcazela.
Qaphela okokuba ikhona ingxaki xa ihagu iphelelwe ngumdla wokutya.
Umchamo kufuneka ubengumbala otyheli kodwa ongagqamanga, oku ngathi ngamanzi anombala. Umbala otyheli ongqindilili, ukuchiza, okanye umchamo onegazi awuqhelekanga. Ihagu engasachamiyo ingafa kukugula.
Ubulongwe kufuneka buqine oku kobulongwe benkomo. Ukuqhinwa, umfinya omanzi okanye uhambiso olune gazi aziqhelekanga.
Kufuneka ubisi lwanele onke amantshontsho ehagu, ngamanye amazwi, hagwana nganye kufuneka ibe ngqukuva kwaye yonwabe. Ikhona ingxaki xa umdlezana amabele eqinile edumbile, nokuba akavelisi bisi laneleyo okanye kufa amantshotsho.
Sebenzisa iimpumlo zakho unukise ukuze uqaphele iingxaki, ezifana nokunga ngeni kakuhle umoya, umsuzo ophezulu, okanye amazinga aphantsi nokuba aphezulu wokufuma. Ukutya okudala okanye izilwanyane ezifileyo. Oko kungathandekiyo eluntwini kwimeko zokuhlala, kananjalo ke nakwii hagu.